ယာဉ်ခြောက်စီး ဆင့်တိုက်မှု သုဝဏ္ဏလမ်းဆုံတွင် ဖြစ်ပွား - Yangon Media Group
ယာဉ်ခြောက်စီး ဆင့်တိုက်မှု သုဝဏ္ဏလမ်းဆုံတွင် ဖြစ်ပွား
သုဝဏ္ဏ လမ်းဆုံတွင် ယာဉ်ခြောက်စီးဆင့် တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ဝေ ဇယန္တာလမ်းအတိုင်း သင်္ဃန်းကျွန်း မှ သာကေတဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း (စုံစမ်းဆဲ) မောင်းနှင်လာသည့် YBS 18 ယာဉ်သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ မွန်းလွဲ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ် ခန့်က သုဝဏ္ဏလမ်းဆုံအရောက် Free ကြောမှ ဖြတ်စဉ်အရှိန်လွန် ကာ သံသုမာလမ်းအတိုင်းသွားနေ သည့် ယာဉ်မောင်း ဦးမင်းအောင် မောင်းနှင်သော YBS 75 ခရီး သည်တင်ယာဉ်အား ဝင်တိုက်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ တိုက်မိပြီးနောက်အနီးရှိ Toyota Crown ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်၊ ဆူဇူကီး ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်၊ Toyota Belta ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်နှင့် ဖီလ်ဒါအငှား ယာဉ်တို့အား ဆင့်ကဲတိုက်မိကာ ယာဉ်ခြောက်စီးပျက်စီးခဲ့ကြောင်း အမှတ်(၂) ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ် ခြောက်စီးစလုံး ပျက်စီးမှုအတွက် ကျပ် ၁ဝ၆ သိန်းရှိကြောင်း အမှတ် (၂) ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး ထံမှ သိရသည်။ အမှတ်(၂)ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက”ဝေဇယန္တာလမ်းအ တိုင်းမောင်းလာတဲ့ YBS 18 ကား က မီးပွိုင့်ရောက်တော့ ဖရီးလမ်း ကြောကနေထွက်တဲ့အခါ သံသုမာလမ်းကနေ ပွိုင့်စိမ်းလို့ထွက် လာတဲ့ကားငါးစီးကို တိုက်မိတာ။ ခြောက်စီးဆင့်တိုက်မိတာပေါ့ ။ အရှိန်လွန်ပြီးတိုက်တာ။ ဖရီး ကြောဆိုတာလည်း တစ်ဖက်က ကားရှင်းမှထွက်ရတာ။ ကား မရှင်းဘဲထွက်တော့ အရှိန်လွန် တိုက်တာ။ တစ်ဖက်ကလည်း မီး စိမ်းလို့ထွက်နေပြီ။ ကားတွေပျက် စီးတာများတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ တာမရှိခဲ့ဘူး”ဟု ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ပြောသည်။
ယာဉ်တိုက်ပြီးနောက် YBS 18 ယာဉ်မောင်းမှာ အခင်းဖြစ်နေ ရာ၌ ယာဉ်ကိုထားကာ ထွက်ပြေး သွားကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းယာဉ်တိုက်မှုနှင့် ပတ် သက်ပြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်းမှ ယာဉ်(ပ) ၄၂/၂ဝ၁၈၊ အရမ်းမောင်းခြင်းပုဒ် မ-၂၇၉၊ သတင်းပေးရန်ပျက် ကွက်ခြင်း ပုဒ်မ-၂ဝ၂ ဖြင့် YBS 18 ယာဉ်မောင်းကို အမှုဖွင့်အရေး ယူထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင် ငံတကာအဆင့်မီ အဆောက်အအုံများ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် (MCEA) နှင့် (MLCA) အသင်းတု?
ခေါင်းဆောင်ကြီး တိန့်ရှောင်ဖိန်၏ စီးပွားရေး လမ်းညွှန်မှုများ နှစ်(၄ဝ)ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပမ?
မောင်တောခရိုင်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညမထွက်ရ အမိန့် ထပ်မံ သက်တမ်းတိုး
တိမ်းရှောင်ဘင်္ဂါလီများပြန်လည်လက်ခံရေး နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် မတိုင်မီ နှစ်နိုင် ငံပူးပေါင်းလုပ် င??
ရန်ကုန် မိုးပျံအမြန်လမ်းတည်ဆောက်ရေး လ၀က်အတွင်း ကုမ္ပဏီ ၂၀ခန့် လျှောက်ထား
ဂျိုဗစ်အတွက် ရီးရဲလ်အသင်း၏ ဆက်သွယ်မှု မရသေးဟု ဖရန့်ဖတ် ဆို